Indlela ukupheka amakhekhe ne aluhlaza okwesibhakabhaka?
Lapho isizini iqala aluhlaza okwesibhakabhaka, singamakhosikazi emizi abaningi basheshe ukwenza lezi amajikijolo Amalungiselelo ebusika. Nokho, zikhona izindlela eziningi lapho izithelo fresh liyadingeka. Nge aluhlaza okwesibhakabhaka ukwenza nje amadombolo ne-yogurt, kodwa futhi amakhekhe okumnandi kakhulu. Ukuze ukulungiselela yabo uthatha kancane isikhathi, yebo, ubuncane izithako. Ngakho, indlela yokwenza amaqebelengwane aluhlaza okwesibhakabhaka? Ungadliwa ukumboza kulesi sihloko.
Inhlama for ophaya
Inhlama unendima ekhethekile ekulungiseleleni namakhekhe. It kuncike kwikhwalithi yaso futhi ukunambitheka. Ngokuba ukulungiswa uzodinga:
uwoyela Sunflower - 1 inkomishi.
Ushukela - 200 amagremu.
Amanzi abandayo - 0.5 amalitha.
Salt - ingcosana.
Imvubelo - 50 amagremu.
ufulawa kakolweni - bangaki kuzothatha inhlama.
Indlela uxove inhlama?
Kusukela kulolu vivinyo Ihambe ophaya okumnandi kakhulu nge aluhlaza okwesibhakabhaka, iresiphi ukuthi silula. Esitsheni ehlukile ukuze uhlanganise amafutha sunflower, ushukela, usawoti namanzi. Ungqimba kwaphumela kumele gqoka umlilo futhi imenze ubilise. Ukwakheka kumele ubilise imizuzu emihlanu. Ngemva kwalokhu mass kumele asukume cool egunjini lokushisa. Ngemva kwalokho, esikhathini esizayo kubalulekile uthele inhlama imvubelo kanye ufulawa. Uma ungathandi ophaya amnandi kakhulu nge aluhlaza okwesibhakabhaka, kungenzeka ukuba uthele kuphela ingxenye yalo ushukela.
Manje ungakwazi uxove inhlama. Ukuze uqale, ukwakheka kumele kube njengoba pancake: a yisisu kancane. Kancane kancane uthele inhlama ube ufulawa. Ngenxa yalokho, akufanele vela etulu. Inhlama ngemva ukuxuba kuyadingeka ukuze ngibambe isikhathi esithile ukuza ke. Ungabese uqhubekele ukulungiswa ophaya.
Ukuze ukugcwaliswa kufanele uzilungiselele emikhiqizweni kusengaphambili. Uzodinga:
Aluhlaza okwesibhakabhaka Fresh - 400 amagremu.
Amazambane isitashi - 100 amagremu.
Isinyathelo sokuqala ukuba kwahlukaniswe inhlama okulungiselelwe ku izingcezu ezincane bese Roll wabakhipha amakhekhe kucocekile. Khumbula ukuthi ngesikhathi bayobhaka aluhlaza okwesibhakabhaka fresh inike eziningi juice. Ngakho-ke, kulokhu isitashi kudingeka agcine ketshezi ngaphakathi Patty. Ngakho kanjani ukudala amakhekhe amahle nge aluhlaza okwesibhakabhaka? Ukuze uqale, ikhekhe ngalinye udinga ukubeka isitashi. 0.5 ithisipuni tando suffice. I powder kufanele ngobumnene yahlakazeka lonke ikhekhe.
Starch ungqimba lufakwa amajikijolo. Patty ngasinye kuthatha 2 kuya ku-3 amathisipuni of aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemva kwalokho, amajikijolo kufanele ufafaze ushukela. Inani kwakho kuncike ukuthi yini oyithandayo amakhekhe: amnandi noma cha.
Pies kungaba noma ikuphi ukuma. Ekuqaleni ubukeka namakhekhe esime onxantathu. Ukusabalala workpiece uyasukuma umphetho. Lokhu kuvimbela ukuvuza ukugcwaliswa kuso. Uma amaqebelengwane aluhlaza okwesibhakabhaka ngaphakathi, Kufanele uzishiyele imizuzu 40 kulabo kancane ngaphezulu esekhulile.
Lapho bayobhaka kuzokhulisa ngobukhulu, udinga zokuwuhuqa ne amaqanda washaywa. Baked amakhekhe amajingijolo, zokupheka ezinikeza ukuqaphela ngisho wekhaya ongenalwazi, cishe ihora ezingeni lokushisa 200 ° C. imikhiqizo Iphele kufanele ugcobe ibhotela.
Pies ne aluhlaza okwesibhakabhaka kusuka imvubelo inhlama
Leresiphi kuba ezijwayele eziningi esikoleni. Ukuze inhlama uzodinga:
Ubisi efudumele - 0.5 amalitha.
Sol - 0.5 isipuni.
amafutha yemifino - 3 tbsp.
Ibhotela noma nesinqumela - isipuni.
Ushukela - 2 tbsp.
Ufulawa - zingaki azothatha inhlama.
imvubelo elomile - dessert spoon ngaphandle phezulu.
Lezi zingxenye kumele ezixutshanisiwe. Ukuze uqale, kudingeka esitsheni ehlukile ukuze uthele ubisi olufudumele bese wengeza imvubelo. Lapho evulekile, ungakwazi ukwengeza izithako asele. Ufulawa Ukwakheka iqondiswa kangcono ekupheleni. Inhlama kumele kakhulu uxove kahle zonke izingxenye axutshwa. Manje, sokuqamba kufanele kwesokunxele amahora ambalwa. Likhono inhlama kufanele ibekwe endaweni efudumele bente ithawula manzi. Lokhu kuvimbela phama omiswe.
Ngemva kwalokho, inhlama kufanele wengeze ufulawa ukuphumelela ukuvumelana oyifunayo. Ukwakheka yokugcina kufanele ibekwe ngoplastiki, pre ezinamafutha akahle kusuka ngaphakathi. Inhlama kufanele bafake amahora ebandayo 12. Lokhu kungenziwa ebusuku futhi ekuseni ungalungisa imvubelo amaqebelengwane aluhlaza okwesibhakabhaka. Kuyaphawuleka ukuthi ukuhlolwa okunjalo zigcinwa cishe izinsuku ezimbili in the esiqandisini.
Indlela ukubhaka amakhekhe?
Uma esetshenziselwa ukulungiswa ophaya, aluhlaza okwesibhakabhaka eqandisiwe, kufanele kube pre-eneqhwa. Lokhu kuzovumela sokukhipha ketshezi ngokweqile. Amajikijolo kumele exutshwe ushukela ekugcwaliseni wawumnandi.
Inhlama kumele ihlukaniswe izingcezu ezincane, cishe amagremu angu-70 ngamunye. Lokho kuyokwenza izinto amaqebelengwane aluhlaza okwesibhakabhaka usayizi ofanayo. ikhekhe ngalinye kuyadingeka ukuthi unikezele ngezinsizakalo futhi ubeke ukugxusha maphakathi. Okokuqala, ake wagqoka kancane elingenalutho of isitashi, wayesezibeka amajikijolo.
Ngemva kwalokho kulandela ifomu Patty, ngiyibeke phezu bhaka, ngaphambilini ugcobe. Lapho ifomu ugcwele, kubalulekile ukuba ushiye yokubhaka isikhathi esithile. Lapho inhlama kuzokhulisa ngobukhulu, kubalulekile ukuba gcoba pie ngasinye amaqanda washaywa. Treat wabhaka ihora ezingeni lokushisa 200 ° C.
Zokupheka umhlabeleli imilenze frog
Izimfihlo phakathi neminyaka - imibhoshongo yaseGibithe
Unozinti Zheremi Zhano
Abantu endaweni Samara: amagama, amasiko, zokubhukuda
Ngabe izidakamizwa has "Djufaston" side effects